Web Autocares Torres Bus, SL mikendry ny hampahafantatra sy asa vaovao fanatitra ho efa misy mpanjifa sy ny mpampiasa vaovao. Www.torresbus.com sehatra no tompony Torres Bus, SL CIF B45275922 sy adiresy ao amin'ny C / Polideportivo, Villanueva de Bogas 02 - 45410 Toledo ANKAPOBENY fepetra MICROBUSES.ES
Ny fampiasana ny serivisy na ny fifanarahana amin'ny vokatra ao amin'ny MICROBUSES.ES dia mampiseho ny fanekena ireto fepetra manaraka ireto:
1.- Fanekena sy ny fahazoana ny fepetra ankapobeny Amin'izao fifanekena izao dia manambara ianao hoe:
a) Ny maha-olona azy amin'ny taona ara-dalàna sy ny fahafaha-manaiky.
b) Efa mamaky sy manaiky ireo fepetra. Ireo fepetra ankapobeny (izay voambara "General Conditions") mandrindra ny fifandraisana ara-dalàna izay emanates amin'ny dingana fandraisana mpiasa natao teo mpampiasa-mpanjifa (izay voambara "Mpanjifa") ny Web pejy mpanazatra TORRESBUS hita ao amin'ny http://www.torresbus.com URL fananana Torres Bus, SL.
Mandray ny fepetra ankapobe ny mpividy hatramin'ny fotoana ampiasainy na mahazo vokatra. Ity tahirin-kevitra ity dia azo atao pirinty sy tahirizina ataon'ny Clients. MICROBUSES.ES dia manome azy ireo, adiresy imailaka: info@torresbus.com, noho izany dia afaka mametraka fanontaniana momba ny fepetra ankapobe ry zareo.
2.- no Mitondra General Conditions dia manaiky hozakain'izy ny fepetra voalazan'ny 7 / 19988, 13 Aprily-dalàna amin'ny General sy ny fanao, ny 26 / 1984 Act ny 19 Jolay, Jeneraly noho ny fiarovana ny mpanjifa sy ny mpampiasa, ny didin'ny mpanjaka 1906 / 1999, 17 Desambra 1999, noho ny telefaonina na ny fitaovana elektronika amin'ny ankapobeny voan'ny fepetra.
Loi organique 15 / 1999 avy any 13 Desambra, fiarovana ny Tena Manokana Data, ny 7 / 1996 avy 15 Janoary Varotra Trade Lalàna, ary 34 / 2002 avy 11 Jolay Lalàn'ny Services Information fiaraha-monina sy ny Electronic Commerce.
3.- Fanovana ny fepetra ankapobe MICROBUSES.ES dia afaka manova ny fepetra ankapobe amin'ny fampandrenesana mialoha ny mpiasan'ny mpanjifa mialoha, mba hanatsarana ny serivisy sy ny vokatra atolotra amin'ny MICROBUSES.ES. Amin'ny fanovana ny fepetra ankapobeny hita ao amin'ny vohikalan'ny Autobus Torresbus.com.
Io adidy amin'ny fampahafantarana io dia ho takatra ho tanteraka. Na ahoana na ahoana, alohan'ny hampiasana ny serivisy na ny vokatra azo avy amin'ny fifanarahana, dia hotsaraina ny fepetra ankapobe.
4.- Ny fananana ara-tsaina Ny votoatin'ny MICROBUSES.ES dia manaiky ny zon'ny manan-tsaina sy ny indostria ary ny fananana manokana avy amin'ny Torres Bus, SL na ny olona na antokon-dalàna izay ampahafantarina.
Amin'ny fividianana ny vokatra, MICROBUSES.ES dia tsy misy manome zo manova, fampiasana, fandikana, na ny vahoaka fizarana fifandraisana momba izany, nanokana MICROBUSES.ES zo rehetra ireo.
Ny andraikitr'ireo zo voalaza ireo dia mitaky ny fanekena alohan'ny MICROBUSES.ES. Ny fananana ara-tsaina dia manitatra, ankoatra ny votoatiny voarakitra ao amin'ny MICROBUSES.ES, amin'ny sary, logos, design, sary ary loharanom-baiko ampiasaina amin'ny fandaharana azy.
5.- Fampiasana ny asa fanompoana sy ny andraikitra MICROBUSES.ES tsy manome antoka ny fisian'ny aterineto maharitra tolotra ho madiodio avy amin'ny andraikitra azo atao fahavoazana noho ny unavailability ny fanompoana noho ny manery majeure na fahadisoana ao amin'ny tambajotra Telematika amin'ny famindrana angona, alien amin'ny sitrapony.
Ny MICROBUSES.ES dia tsy tompon'andraikitra amin'ny votoatin'ny rohy mankany amin'ny tranonkala hafa izay tsy anananao ary noho izany dia tsy azo fehezina izany. Ny mpanjifa dia manambara fa fantany fa ny fampahalalana nomen'ny MICROBUSES.ES amin'ny alàlan'ny serivisiny, dia tsy ara-dalàna ary tsy omena afa-tsy amin'ny tanjona fampahafantarana.
6.- Privacy sy ny fiarovana ny Tena Manokana Data rehefa nanafaka ny e-mail na hafa rakitra manokana ho fandraisana mpiasa avokoa ny fepetra ilaina asa sasany, Mpanjifa manome ny alalana ho an'ny adiresy ireo mba ho ampiasaina ary ampiasaina mba handefa fifandraisana fampiroboroboana ara-barotra na ny dokam-barotra ny asa sy ny vokatra natolotry ny MICROBUSES.ES.
MICROBUSES.ES dia manome ho an'ny Clients ny adiresy mailaka info@torresbus.com, mba hanafoanana ny fanomezan-dàlana nomena. MICROBUSES.ES dia manambara fa mifanaraka amin'ny fitsipika amin'izao fotoana izao momba ny fiarovana ny angona, indrindra ny Organic Law 15 / 1999, ny 13 tamin'ny Desambra.
Fiarovana ny mombamomba ny olona manokana sy ny didim-panjakana 994 / 1999, ny 11 tamin'ny volana Jona, izay mampivelatra ny lalàna organika voalaza etsy ambony. Ny MICROBUSES.ES dia manome ho an'ny Clients ireo fitaovana ifandraisana voalaza ao amin'ny fehintsoratra teo aloha mba hampiasany ny zon'ny fidirana, ny fanitsiana, ny fanafoanana sy ny fanoherana izay voalazan'ny lalàna manan-kery.
7.- Notifications manamarika rehetra, ny fangatahana, sy ny fitakiana ny fifandraisana ho atao amin'ny ny antoko raha oharina amin'ny ireo fepetra ho an-tsoratra, ary dia heverina ho efa dalàna nanao rehefa efa natolotra araka tanana na nalefa amin'ny alalan'ny taratasy tsy tapaka any amin'ny adiresy ao amin'ny antoko hafa, na ny handefa mailaka izany, na any amin'ny hafa na ny adiresy mailaka ho an'ny tanjona izany ny Mpifanaraka tsirairay dia afaka manondro ny hafa.
8.- Ny vidin'ny tranokala torresbus.com dia miaraka amin'ny VAT ary ny haba hafa tafiditra (raha misy ny fanovana ireo hetra). Ny vidin-tsolika natolotra tao amin'ny tranokalanay torresbus.com dia manan-kery ho an'ny famandrihana natao tamin'io fotoana io ihany nangatahanao io tahan'ny. Raha toa ka tsy natao tamin'io fotoana io ny famandrihan-toerana, dia mety hitranga izany amin'ny fangatahana vidiny aorian'izany, ny hafainganam-pandehany (ambony na ambany) miankina amin'ny vidin'ny marika tsirairay.
9.- Politique fampiantranoana sy fanangonana serivisy. Ny fandoavana ny serivisy dia hatao amin'ny alalan'ny famindrana na carte de crédit. Amin'ny fotoana famandrihana ny 40% ny saram-pidirana dia ampangaina amin'ny karatra voalaza amin'ny mpanjifa. Ny ambim-bidy dia homena, toy izany koa no nampiasaina handoavana ny fametrahana, amin'ny 3 andro mialoha, farafaharatsiny, alohan'ny hanombohan'ny tolotrasa ho an'ny karatra fiara mitovy.
10.- Fanafoanana sy fanovana ny serivisy Ny politikan'ny fanafoanana dia tarihin'ity tabilao manaraka ity; 1.- Nofoanana talohan'ny andro fiasan'ny 3 tamin'ny fiantombohan'ny dia: Tsy misy fandaniana; 2.- Ahemotra eo anelanelan'ny 3 andro fiasana sy ora 24 alohan'ny hanombohan'ny dia; Saran'ny 20% amin'ny saran-dalana. 3.- Fanalana ao amin'ny 24 ora fiasana alohan'ny hanombohan'ny serivisy; Saran'ny 50% amin'ny saran-dalana.
Heverina ho ny Alatsinainy, Talata, Alarobia, Alakamisy sy Zoma, andro aman'alina ny fialantsasatra. Sabata sy Alahady dia tsy heverina ho andro fiasana. Raha toa ka te hanova ny serivisy voasonia ny mpampiasa, dia hangataka azy amin'ny orinasa izay mety na tsy manome alàlana ireo fanovàna. Ireo fanovana ireo dia mety hangatahana mialoha na mandritra ny fanatontosana ny serivisy, ary raha mahazo alalana izy ireo, dia mety hisy vidiny fanampiny amin'ny vidin'ny serivisy voalohany.
Ity soso-kevitra ity dia homena mivantana amin'ny mpamily raha toa ka eny amin'ny fiaramanidina na amin'ny orinasa raha toa ka ampy ny fotoana.
11.- Travel Fepetra (EC) 5612006 * maintsy rehetra fitaterana mpandeha amin'ny mpanazatra ao amin'ny Vondrona Eoropeana fotoana Driving ny mpamily dia voatery miato ny 45 minitra taorian'ny efatra ora sy sasany mitondra fiara, fiatoana izany dia azo soloina amin'ny alalan'ny iray amin'ireo 15 minitra arahina 30 minitra, na ny mitondra fiara interleaved amin'ny fe-potoana sasany 4 ora.
Ny mpamily fiara tsy mihoatra ny 9 ora isan'andro avy ny fotoana fisian'ny asa fanompoana ambony indrindra manomboka mandra-mifarana afaka mankafy ny mivezivezy fiara fitateram-bahoaka, na minibus microbus hatramin'ny 12h misesy isan'andro raha toa ilay dia miaraka mpamily iray, izany hoe raha ohatra: indray andro manomboka ny fanompoana ao amin'ny 9.00h dia tsy maintsy mihatra amin'ny farany 21.00h andro izany. Tamin'ity indray mitoraka ity dia azo omena ho 19h raha toa ilay dia dia roa koa ireo mpitarika ny fitsipika, raha toa ilay dia Maharitra kokoa noho ny andro, dia ataovy ao an-tsaina fa ny sasany ny fotoana eo anelanelan'ny andro sy andro izany dia ho kely noho 11 ora mahitsy .
12.- Hafatra sy fiantohana Araka ny lalàna ankehitriny, ireo fiara ampiasain'ny orinasa izay manolotra ny tolotr'izy ireo amin'ny alalan'ny tranokala dia voarakotry ny fitsipika momba ny fiantohana manaraka. Ny andraikitra sivily tsy maintsy arahina araka ny Lalàna ho an'ny Fahazoan-dàlana sivily sy ny fiantohana ny familiana fiara amin'ny fiara; Fanomezana fanampiny 7ª an'ny Lalàna 301995 ny volana novambra 8, momba ny fitsipika sy ny fanaraha-maso ny fiantohana tsy miankina.
An-tsitrapo madio araka ny Article 50.000.000 12 Eu Royal didim-panjakana 4432001, 27 Aprily ny regulator ny busing sy ny zaza tsy ampy taona. Mpandeha maintsy fiantohana. Ireo fonony fiantohana contingencies ateraky nandritra nandehanany tany amin'ny mpikarama fiara, araka ny lalàna, fa tsy loza nandrakotra ireo zava-nitranga izay mety vokany eo ivelan'ny fiara mpandeha izay ataony ny diany.
Koa, ny mitondra dia ho mendrika ny misy fahasimbana mety hitranga entana napetraka tao amin'ny baotin'i ny fiara, hatramin'ny 14,5 15 EU kilao isan-transportado.- Mp ny entana isaky ny dia lavitra dia tsy ho mendrika ny misy fahasimbana na halatra fatiantoka tanana entana ny mpandeha. Raha toa ka noho ny toetoetran'ny entanao dia mila fandrakofana bebe kokoa noho izay atolotry ny orinasam-pitaterana ianao, dia tsy maintsy manakiana azy manokana.
Ho andraikitr'ilay orinasam-pifandraisan-davitra ny fanavaozana ny fiantohana voalaza etsy ambony. Araka ny voalaza etsy ambony, dia tompon'andraikitra amin'ireo fahasimbana rehetra ateraky ny adidintsika amin'ny alàlan'ny tolotra ataonay izahay, manomboka amin'ny totalin'ny totalin'ny famandrihana.
Tsy ho tompon'andraikitra isika amin'ny: - Ny fahavoazana na ny fahavoazana vokatry ny tsy fetezana ny tranonkala. - Ny adihevitra rehetra mety hitranga mifandraika amin'ny serivisy omen'ny tranonkala, dia hotarihin'ny Fitsarana ao Toledo. 13.-Privacy Afaka jerentsika ny politikantsika manokana mba hahazoana vaovao misimisy kokoa momba izany.
14.- Fitaterana fanampiny Aorian'ny famandrihana dia omena mailaka miaraka amin'ny fanamafisana izany ianao. Toy izany koa, rehefa vita ny serivisy, dia alefaso mailaka hafa izahay ary hangataka ny hevitrareo momba ny asa fanompoana voaray. Ity fanadihadiana ity dia hanampy antsika hampandre ny mpampiasa hoavy mikasika ny traikefa niainana niaraka tamin'ny orinasa.
15.- Fanamarihantsika Isika dia mametraka ny mety hisakanana ireo fanehoan-kevitra avy amin'ireo mpampiasa izay tsy heverintsika ho mety.
16.- Momba ny Bus Torres www.torresbus.com dia sehatra ho an'ny famandrihana fandehanana any amin'ny bus, minibus ary fiara liana amin'ny mpamily, ny fananan-tany Torres Bus, SL miaraka amin'ny angon-drakitra manaraka; Torres Bus, SL no tompon'ireo zo ara-tsaina amin'ny alàlan'ny sary, logos, texts ary ny endrika na zavatra hafa na singa ao amin'io tranonkala io.
Raha toa ka tsy tompon'ny Torres Bus, SL dia manana ny fahazoan-dàlana ilaina hampiasana azy ireo. Ny famoahana, ny fizarana, ny fivarotana, ny fanovana ny karazana rehetra tsy misy fankatoavana an-tsoratra avy amin'ireo tompon'andraikitry ny Torres Bus, SL dia voarara.
MICROBUSES.ES tsy afaka mihevitra izay madio ho an'ny diso, tsy mendrika na tsy ara-dalàna ny fampiasana ny vaovao miseho ao amin'ny Internet pejy MICROBUSES.ES Noho ny fetra napetraka ny lalàna, MICROBUSES.ES jerena, dia hoatran'ny tsy madio noho ny tsy fisian'ny fahamarinana , tsy fivadihana, fanavaozana sy araka ny marina ny tahirin-kevitra na ny fanazavana ao amin'ny pejy Internet.
Internet pejy MICROBUSES.ES dia mety ahitana rohy (rohy) hafa antoko fahatelo MICROBUSES.ES tsy afaka mifehy. Noho izany, tsy afaka hiantsoroka andraikitra ny votoaty izay toa eo amin'ny pejy ireo. Ny lahatsoratra, sary, feo, fihetsik'ireo sary mihetsika, rindrambaiko sy ny votoaty tafiditra ao amin'ny vohikala ity dia ny fananana manokana ny MICROBUSES.ES na ny licensors. Ny fifindran'ny, fanapariahana, fandikana, fitehirizana, na tanteraka na ampahany dia tsy maintsy manana fifandraisana bahoaka ny mazava fankatoavan'ny MICROBUSES.ES.
Toy izany ihany koa, ny fahafahana miditra amin'ny sasantsasany izay ampiasain'ny MICROBUSES.ES amin'ny alalan'ny tranonkala dia tsy maintsy manome tahiry manokana. Ao amin'ny fanarahana ny fepetra ao amin'ny Lalàna Organic 15 / 1999 avy any 13 Desambra, fiarovana ny Tena Manokana Data, izahay mampahafantatra anareo fa ireo vita amin'ny endrika, ny angon-drakitra manokana ho tehirizina na trandrahana any ny raki-daza ny microbus .ES mba hahafahanao manolotra sy hanolotra ny serivisinao ary hampahafantatra anao ny fanatsarana ny tranonkala.
Nanoro hevitra koa izahay ny amin'ny mety hisian'ny fampiharana ny zon'ny fidirana, rectification, fanafoanana sy ny fanoherana ny angon-drakitra manokana, amin'ny info@torresbus.com tari-dalana. General Information ny manaraka ny 34 / 2002 LALÀNA Title: Torres Bus, SL Address: C / Polideportivo, 02 45410 Bogas Toledo Villanueva de Contact: info@torresbus.com TFN.- 925313009 607372252 Movil.- CIF.- B45275922
Fifanarahana Febroary 6th, 2017Fampiofanana mpampiofana